Qidmadda Khasabka ah ee Eriteriya - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Qidmadda Khasabka ah ee Eriteriya
La cusbooneeyay måndag 19 september 2011 kl 14.55
La daabacay måndag 19 september 2011 kl 14.33
Dawladda Iswiidhen ayaa isku dayday sidii ey waddammada ku bahoobay ururka midowga Yurub u joojin lahaayeen qidmadda khasabka ah ee dalka Eriteriya uu ka qaado dadka u dhashay dalkaa ee waddammada EU-da ku dhaqan, sida uu sheegay Carl Bildt - wasiirka arrimmaha dibadda Iswiidhen.
Isagoona islamarkaa ka gaabsaday inuu wax ka sheego in dalkani uu middaa u isticmaali doono sidii loo soo deeyn lahaa suxufi Dawit Isaak.
Bishii maajo ee sannadkan ayuu dalka Boqortooyada Ingiriisku ku guuleeystay in dalka Eriteriya laga soo daayo afar muwaadin ee ingiriis ah, kadib hanjabaad uu dalka Boqortooyada Ingiriisku ugu hanjabay dalka Eriteriya inuu haddii kale joojin doono qidmadda khasabka ee dalkooda laga ururiyo.
Carl Bildt, ayaa carabka ku adkeeyay in muwaadiniinta Ingiriisku haysteen oo keliya dhalsho ingiriis ah ee aaney u raacin tii Eriteriya - waana mid saameeyn ku leh xaaladda suxufiga iswiidhishka.
Wuxuu kaloo wasiirku sheegay in dalkani kala xaajooday dalka Ingiriiska, hase yeeshee uu dalkani go'aansaday dhabbo kale.
Wuxuu kaloo wasiirku sheegay in waddammo EU-da ka mid ah uu fikirkaa ka socon waayay si culeeys dheeriya loo saaro Eriteriya.
Dadyowga asal ahaan ka soo jeeda dalka Eriteriya ee dalka dibadda kaga dhaqan ayaa lagu khasbaa iney bixiyaan 2% dakhligooda, waana dakhliga ugu badan ee dalkaa dibadda uga yimaada sida ay sheegtay hayadda caalamiga ee Qaramada Midowday. Dalka Iswiidhen ayey eriteriyaanka ku dhaqani bixiyaan tobaneeyo malyuun oo koron.
Suxufiga iswiidhishka – eriteriyaanka ee Dawit Isaak ayaa tobankii sannadood ee ugu dambeeyey ku xabisnaa dalkaa iyada oo aan la hor-keenin maxkamad islamarkaana aan lagu soo oogin wax dacwad ah. Waana fal lagu dhaleeceeyo dawladda Iswiidhen inaanay u hagar-bixin.